संसद अवरोध खुलाउने एमालेको संकेत ! यस्तो छ स्थायी कमिटीको निर्णय - Everest Dainik - News from Nepal
संसद अवरोध खुलाउने एमालेको संकेत ! यस्तो छ स्थायी कमिटीको निर्णय
काठमाडौं, पुस १९ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा नेकपा एमालेले संसदमा जारी अवरोध खुलाउने संकेत गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरमा मंगलबार बिहान बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले सोमबार सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै संसद खुलाउने जनाउ दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्न सत्तापक्ष तयार भए संसद अवरोध खुलाउन आफूहरु तयार हुने प्रतिक्रिया दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार संविधान संशोधनका मुद्दामा आफूले बोल्न नमिल्ने फैसला गरेपछि एमाले नैतिक दबाबमा परेको थियो । तर, बैठकले सर्वाेच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको पनि बताएको छ ।
याे पनि पढ्नुस संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदै,महाभियोग पनि टेबल गर्ने कार्यसूची
याे पनि पढ्नुस संविधान संशोधनबारे एमालेल‍े आज निर्णय गर्ने
एमालेसहितको विपक्ष दलहरुको अवरोधका कारण संसद बैठक समेत एक महिनायता अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार सीमाकंन हेरफेरको विषय प्रदेश सभाको अनुमतिमा मात्रै गर्न सकिने राय दिएपछि एमाले झनै उत्साही भएको हो।
ट्याग्स: CPM UML, sambidhan samsodhan